AMISOM oo xaqiijisay in ciidankeedu aysan ka bixin magaalada Marka. – Radio Daljir
AMISOM oo xaqiijisay in ciidankeedu aysan ka bixin magaalada Marka.
Luulyo 11, 2016 11:31 g 0
(July 12 2016)-Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa bartiisa Twitterka ku soo daabacay qoraal kooban oo ay ku beenineyso iney Al-Shabaab qabsadeen magaalada Marko, iyadoo wararka noocaas ah ku tilmaantay kuwo aan sal iyo raad toona laheyn.
AMISOM waxa ay sheegtay qoraalka in xerada ay degan yihiin ciidamada Midowga Afrika ay 800 oo mitir u jirto magaalada Marka, ayna been abuur yihiin wararka sheegaya in Marko ay ka baxday gacanta dowlada.
“Ciidamada AMISOM wey sii joogi doonaan magaalada Marko mana jiraan qorsheyaal halkaas ay uga soo baxayaan xiligan” ayaa lagu yiri qoraalka ay AMISOM ku daabacday barteeda Twitterka.
Dhanka kalena gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed oo lahadlay xalay Idaacadda Daljir ayaa xaqiijiyey in ciidanka Marka ka baxay ay yihiin Milatariga Soomaaliya.
DHEGEYSO-Lixdan jir lagu diley deegaanka Ceel-xabley ee G.Bari.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Garoowe 12 07 2016.